Home Somali News Yemen: Somali-American Afduub loogu haysto dalka Yemen
Laba qof oo u kaladhashey dalalka Maraykanka iyo Singapore ayaa kooxo ku afduubtey gudaha dalka Yemen ay sii daayeen, waxaana ay hadda gaareen dalka Cumaan, sida lagu sheegay war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maaykanka. Sii deynta dadkan waxaa gacan ka geystey Saldanada Cumaan.
Warkan ayaa yimid kadib markii Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanku ay saxaafadda u xaqiijisey in dhawr qof oo u dhashey dalka Maraykanka afduub loogu haysto dalka dagaladu ka socdaan ee Yemen, kadib markii Joornaalka Washington Post daabacay markii u horeysey warka afduubka.
Sida laga soo xiganayo ilo dalka Yemen u dhashey waxaa weli gacanta kooxda afduubatey ku jira saddex qof oo haysta dhalashada dalka Maraykanka waxaana kamid ah qof Soomaali Ameerikaan ah. Dadkaan lama sheegin magacyadooda iyo waxa ay ka qabanayeen dalka Yemen, waxaase la xaqiijiyey in lagu hayo magalada Sanca oo ay ka taliyaan Xuuthiyiintu.
Isla maanta ayaa muuqaal cajil ah laga arkey Youtube-ka haweeney u dhalatey dalka Faransiiska oo afduub loo haysto, taas oo dalabanaysa in la caawiyo. Xukuumadda Faransiiska ayaa sheegtey in ay samayneyso waxkasta oo ay haweeneydaas ku soo badbaadin karto.
Haweeyneydan ayaa lagu agacaabaa Isabelle Prime waxaana ay u shaqeyneysey Mashruuc uu dalka Yemen ka maalgelinayey banigaga Adduunka.
Fallaagada Xuuthiyiinta ee inqilaabey xukuumaddii Yemen ayaa farta lagu fiiqey in ay iyagu ka danbeeyaan afduubkan isa markaana dhaqaale ku doonayaan ay ku maal-geliyaan dagaalada ay ku jiraan.
Somali-American in Yemen
Somaliland: Saylici Iyo Hogaanka KULMIYE Oo Isla Qaatay Go’aanka Ugu Dambeeya Ee Ay Maanta Ku Wajahayaan Mucaaridka
Somaliland: Wafti Madaxwayne Ku Xigeenka Hogaaminayo Oo Ay Ku Jiraan Madax-Dhaqameed Reer SaaxilOo Maanta Dalka Ka Dhoofi,,